Daawo;‘Alle Dile Ayaa Dhinta’.. Ilma Yar oo Kasoo Dhacay Dabaqa Labaad oo Si Layaab Badan Uga Badbaaday Geeri | Baahin Media
Daawo;‘Alle Dile Ayaa Dhinta’.. Ilma Yar oo Kasoo Dhacay Dabaqa Labaad oo Si Layaab Badan Uga Badbaaday Geeri
Warbaahinta bulshada ayaa la isla dhex marayay dhacdo argagax badan, ilma yar oo labo sano jir ah oo ka soo dhacay dariishada dabaqa labaad guri ku yaalla Shaboori ee dalka India.
Jariidada Daily Mail ayaa sheegtay in dhacdadani ay dhacday 4 March, oo ay ka dhcday magaalada Chopuri ee gobolka Madhya Pradesh ee dalka India. ilmaha yar ayaa ku soo ag dhacay haweenay wada mareysay oo dhacdadan argagax ka noqodday.
Haweenaydan ayaa nafteeda eedaynaysa kadib markii ilmahan yari uu gachameeda ka baxsaday, dhacdo argagax badan, markii dambe inta ay wareertay ayey fariisatay jaranjaro goobta ka ag-dhaweyd oo xanu gacansi ku hortaallay.
Sida muuqaalka laga arkayo, ilmaha yar xaggiisa waxaa u soo carartay labo nin oo xaaladdiisa eegay, kadib gaari ayaa la saaray oo dhanka isbitaalka ayaa loola cararay.
Ilmahan yar ayaa warbaahintu sheegaysaan in uu ku badbaaday fiillooyin koronto oo uu ku soo dul dhacay inta aanuu dhulka soo gaarin ka hor, arrintaas oo ka khafiifisay dhibaatooyinkii xoogganaa ee uu naftiisa ku waayi kari lahaa marka uu si toos ah dhulka ugu soo dhaco.
Warbixinnada laga helayo ayaa sheegay in markii ay dhakhaatiirtu baareen ay ku arkeen dhaawacyo yaryar oo xagtiimo u badan oo jirkiisa soo gaaray, isla maalintiiba isbitaalka waa laga soo saaray isagoo ay xaaladdiisu wanaagsan tahay. dad ka soo aragti dhiibtay dhacdadan wiilkan yar ayaa qaarkood ay ku sheegeen in ilmahan yari uu geerida khiyaamay, maadama aanuu badbaadeen si kasta oo ay noqoto, halka dadkii dhacdada goobjoogga u ahaa ay sheegeen in dhibaata ay yareeyeen fiillooyin koronto oo uu ku soo horreeyay inta aanuu dhulka soo gaarin ka hor.